power cable ကိုတင်ခြင်း - Huatai
ပါဝါ cable ကိုတင်ခြင်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
Power cable မ်ားသည် power transmission equipment နှင့် power လက်ခံခြင်း equipment တို့အကြားဆက်သွယ်မှုအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ cable ၏အရည်အသွေးနှင့် cable connection ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် power transmission နှင့် transmission နှင့် distribution equipment တို့၏လုံခြုံမှုကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝါကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကကျသောကဏ္ is တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မော်ဒယ်များ၊ သယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်၊ ပစ္စည်းများနှင့်အချောခံခုခံနိုင်မှု၊ ကေဘယ်ကွင်းများ၊ တံတားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၂။ ကေဘယ်ကြိုးများ၏မျက်နှာပြင်၊ တံတားထောက်ပံ့ကိရိယာနှင့်တံတားတို့သည်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးချောမွတ်။ ကြာရှည်ခံ။ တည်ငြိမ်။ အသွင်အပြင်ချောမွေ့ပြီးသံချေးမကင်းပါ။
၂။ ကေဘယ်ကြိုးကိုခိုင်မာသော၊ အလျားလိုက်၊ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်သင့်သည်။ bracket support နှင့် hanger ၏ fixing method ကို design design နှင့်အညီလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို bracket က၏တူညီသောအလွှာ၏ crosspieces အတူတူအလျားလိုက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်သင့်, အမြင့်သွေဖည် 5mm ထက်နည်းသည်။ bracket support နှင့် hanger တို့၏သွေဖည်ရာလမ်းတစ်လျှောက်သွေဖည်မှုသည် 10mm ထက်မကြီးရပါ။ Slope နှင့်အတူ cable တုတ်ကျင်းတွင်သို့မဟုတ်တည်ဆောက်ထားသည့် cable support သည် cable တုတ်ကျင်းသို့မဟုတ်အဆောက်အ ဦး နှင့်ဆင်တူသည်။ ကေဘယ်လ်ပံ့ပိုးမှု၏အပေါ်ဆုံးနှင့်အောက်ခြေမှအကွာအဝေး၊ မြေညီထပ်သို့မဟုတ်တုတ်ကျင်း၏အကွာအဝေးနှင့်မြေပြင်သည်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
3. စုဝေးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၏ဒေါင်လိုက်သွေဖည်အရှည်၏ 2/1000 ထက်နည်းဖြစ်သင့်သည်, support cross brace ၏အလျားလိုက်အမှားသည်၎င်း၏အကျယ်၏ ၂/၁၀၀၀ ထက်နည်းရမည်။ အဆိုပါထောင့်ဖြတ်သွေဖည်၎င်း၏ထောင့်ဖြတ်အရှည် 1000 ထက်နည်း5/ ဖြစ်သင့်သည်။
၄။ လှေကားဘောင် (tray) ကို support နှင့် hanger တစ်ခုချင်းစီတွင်ခိုင်ခိုင်မာမာထားသင့်သည်။ လှေကားဘောင် (tray) ကိုချိတ်ဆက်ထားသောပန်းကန်၏သော့များကိုတင်းကျပ်သင့်ပြီးအခွံမာသီးကိုလှေဘောင် (ဗန်း) အပြင်ဘက်တွင်ထားသင့်သည်။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းလှေကားဘောင်ကိုသံမဏိထောက်ခံမှုနှင့်ဆွဲကြိုးပေါ်တွင်တပ်ဆင်သောအခါလျှပ်စစ်ဓာတုပစ္စည်းချေးငွေကိုကာကွယ်ရန်အစီအမံများရှိသင့်သည်။
၅။ ကေဘယ်ကြိုးတံတား၏အလှည့်အလှည့်အချင်း ၀ က်သည်တံတားပေါ်ရှိကေဘယ်ကြိုး၏အနည်းဆုံးကွေးနိုင်သည့်အချင်းထက်ပိုကြီးသင့်သည်။
၆။ ကေဘယ်ကြိုးကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်၊ မြေထည်ထိုးဖောက်မှုကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထို့အပြင် grounding ခုခံနိုင်မှုသည်နိုင်ငံအဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ၏လိုအပ်ချက်များထက်နည်းကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
တတိယအချက်မှာ၊ ဆိုက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသောကြိုးကြိုးများ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်း
စီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုသော power cable များ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပုံစံများသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ပုံများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၏အသွင်အပြင်ကိုပျက်စီးခြင်းမှကင်းဝေးစေသင့်ပြီးသေချာစေရန်ကြီးကြပ်သူသည် cable ကို ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ဦး စွာပြုလုပ်သည်။ ။ ကေဘယ်ကြိုးများ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ပါကအစိုဓာတ်ကိုစစ်ဆေးသင့်ပြီး“ သက်သေခံသုံးချက်” ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
စတုတ္ထအချက် - power cable ချခြင်း၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်း
၁။ ကေဘယ်လိုင်းသည်ပိတ်ဆို့ခံရပြီးကောင်းစွာညှစ်ထုတ်လိုက်သည်။ သတ္တုအစိတ်အပိုင်း၏အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအလွှာသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။
၃။ မတင်မီ၊ ကေဘယ်တစ်ခုစီ၏အရှည်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အမှန်တကယ်အကွာအဝေးအရတွက်ချက်ပါ။ အတန်းတစ်ခုစီ၏ကေဘယ်ကြိုးများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစီစဉ်ပါ။
(2) ပျက်ကွက်မှု၏အမှု၌ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အဆင်ပြေစေရန်အလယ်အလတ်ပူးတွဲအနီးရှိတစ် ဦး ကအားလပ်ချိန်မှာအရှည်သိုလှောင်ထားသည်။ အလယ်အဆစ်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၁ မီတာထားပါ
(၃) အလယ်အဆစ်၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုသံမဏိသံချပ်ကာတပ်ဆင်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောကြေးနီဝါယာကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာအချင်း ၂ မှ ၃ မီလီမီတာရှိသောကြေးဝါဝါယာကြိုးဖြင့်သံမဏိသံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ထားသည်။
(4) အလယ်အလတ်ပူးတွဲ၏အရံအရှည်ကိုသဘာဝကွေးခြင်းနှင့် cable ကို၏ကွေးထက်မနည်းဖြစ်သင့်သည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း၌ပုံ ၅-၃-၂
ကွေး၏အချင်းဝက်, အကွေးအစိတ်အပိုင်းကိုပြုပြင်ရန်ကဒ်2ထက်နည်းသည်မဟုတ်။
၆။ ကေဘယ်ကြိုး၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု -
(၁) အပြိုင်တင်ထားသည့်ကေဘယ်ကြိုးများအတွတ်သူတို့၏ပူးတွဲအနေအထားများကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသင့်သည်။ cable ကိုတုတ်ကျင်းများနှင့်စက်အခန်း
(2) bracket ကပေါ် cable ကို connector ကိုတစ် ဦး insulator တွင်လည်းထောက်ခံမှုပြားနှင့်အတူ fixed သင့်တယ်, ထောက်ခံမှုပြားကိုတိုးချဲ့သင့်ပါတယ်
၇။ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာ support layer ပေါ်တွင် cable ကိုချထားပါ။ cable ကို tray ၏အပေါ်ဆုံးအဆုံးမှထုတ်ယူသင့်သည်။ cable ကို support သို့မဟုတ်မြေ၌ဆွဲယူခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မဖယ်ရှားရသေးသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများဖြစ်သောကေဘယ်လ်ပေါ်တွင်လိမ်ခြင်းနှင့်အကာအကွယ်အလွှာကိုအက်ကွဲခြင်း၊
၈။ စက်တပ်ထားသောကြိုးများ၏အမြန်နှုန်းသည် ၁၅ မိနစ် / မိနစ်ထက်မပိုပါစေနှင့်။
၉။ ကေဘယ်လ်ကြိုးများသည် cable တုတ်ကျင်းများ၊ ဥမင်များ၊ ရိုးတံများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ၁၀။ ကြိုးနှင့်အပူပိုက်နှင့်အပူသုံးကိရိယာများအကြားအသားတင်အကွာအဝေးသည် ၄ ​​င်းတို့၏အပြိုင်ဖြစ်သည်ထက်နည်းရမည်။ အကာအကွယ်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများပြုလုပ်သင့်သည်။
၁၁။ ကြိုးများအဆောက်အအုံများ၊ ဥမင်များ၊ ကြမ်းပြင်များ၊ အပြင်နံရံများနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးနိုင်သောအခြားနေရာများသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါစက်မှုအင်အားတစ်ခုသို့မဟုတ်အကာအကွယ်အဖုံးပါသောအကာအကွယ်ပြွန်ကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။
၁၂။ ပိုက်လိုင်းတွင်ရေမရှိဘဲအမှိုက်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသင့်ပါ။ ကေဘယ်ကြိုးကြိုးချည်စဉ်အကာအကွယ်အလွှာကိုမပျက်စီးစေရ။ အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားရန် cable ကိုမချခင်ကေဘယ်ပြွန်ကိုသောင်တင်သင့်သည်။ ပိုက်ထဲသို့ထည့်သွင်း cable ကို၏ Cross- အပိုင်းဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်ပါတယ်။ ကွေးမှာ 13. ကွေးအချင်းဝက်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသေချာစေရန်သေချာပါစေ။
၁၄။ ကေဘယ်ကြိုးကိုချပြီးသောအခါအပျက်အစီးများကိုအချိန်မီဖယ်ရှားသင့်ပြီးအဖုံးဖုံးထားသင့်သည်။ လိုအပ်ပါကအဖုံးကွာဟမှုကိုတံဆိပ်ခတ်ပါ။
၁၅။ ကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်းနေရာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု -
(၁) ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ် ၄၅ ဒီဂရီကျော်သောထောင့်ရှိဒေါင်လိုက်ထားသည့်ကေဘယ်ကြိုးများအတွက်ကွင်းခတ်များသို့မဟုတ်တံတားများအကြားအကွာအဝေးသည် ၂ မီတာထက်နည်းသည်။
(၂) အလျားလိုက်အလျားလိုက်ထားသည့်ကေဘယ်ကြိုးများအတွက်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအဆုံး၊ အလှည့်နှင့်ကေဘယ်ကြိုးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကွင်းခတ်များသို့မဟုတ်တံတားများကိုထောက်ပံ့ပေးရမည်။
(၃) ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အမိုးတစ်လျှောက်တွင်ထားရှိသည့်ကေဘယ်ကြိုးများသည်တင်းကျပ်သောကလစ်များဖြင့်ခိုင်မာစွာတည်ရှိပြီး၎င်းတို့အကြားအကွာအဝေးသည် ၁ မီတာထက်မကြီးစေရ။
ငါးပါဝါ cable ကိုစမ်းသပ်မှု
ပါဝါကေဘယ်ကြိုးကိုချပြီးပါက၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှု၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာသည်လျှပ်ကာမှုခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း၊ DC အားဗို့အားစစ်ဆေးခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိတိုင်းတာခြင်းနှင့်ကေဘယ်ကြိုး၏အဆင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစစ်ဆေးရမည်။ အမျိုးသားရေးနှင့်စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းအင်ဂျင်နီယာစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပြီး site ပေါ်တွင်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုအတည်ပြုပါ။